Diffimg: fampiharana fampitahana sary | Avy amin'ny Linux
Azoko antoka fa indraindray ho nanao ny fampitahana sary roa ianao amin'ny lalao na fanamby sasany izay tsy maintsy ahitanao fahasamihafana maromaro. Amin'ity karazana hetsika ity dia manome anao sary roa farafahakeliny izay mitovy izy ireo ary tsy maintsy mahita ny tsy fitovizany ianao.
Ho an'ity karazana hetsika ity dia misy fampiharana izany dia hanampy anao hahita ireo karazana fahasamihafana ireo. Diffimg fampiharana io voasoratra maimaimpoana amin'ny Qt sy loharano misokatra izay tompon'andraikitra amin'ny fakana sary an-tsaina sy mahita ny fahasamihafana misy eo amin'ny sary roa satria mahatonga ny fampitahana azy roa tonta.
Ity fampiharana ity dia miandraikitra ny fanamarihana ireo fahasamihafana hitany eo anelanelan'ny sary azo ampitahaina ary izay tsy tsikaritra amin'ny fahitana voalohany.
Ny iray amin'ireo fampiasana lehibe indrindra an'ity fitaovana ity dia ny fanamarinana ny fanovana amin'ny sary, izay ampiasainy metrika maro azo ampiasaina hikajiana ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo.
Amin'ny ankapobeny ny zavatra ataony diffimg dia ny fanaovana pixel by pixel check ary asehoy ny mpampiasa ny faritra nahitany ny fahasamihafana amin'ny toerana iray amin'ny piksely eo anelanelan'ny sary roa hijerena.
Ny sasany amin'ireo fanamarinana ireo dia isaina ary ny toerana tsy itovizan'ny piksel dia aseho ho sarontava loko.
Ny fomba fampitahana sary dia afaka mampiseho saron-tava mena izay manondro fiovana kely na mavo hanasongadinana ireo fahasamihafana lehibe indrindra misy eo amin'ny sary roa.
Diffimg manana interface interface somary intuitive sy mora ampiasaina izy io, dia mampiasa ny OpenCV ho toy ny backend izay anohana azy hahafahany mamaky sy mampitaha ny sary bit 8/16/24/32 tsy misy olana.
Ny hany maharatsy an'ity fampiharana ity dia ny tsy fanohanany ny fantson'ny alpha. Lavitra, afaka mamaky ireo endrika sary fototra indrindra toy ny BMP, PNG, JPG, fa koa Tiff sy OpenExR.
DiffImg dia rindrambaiko miampita sehatra satria araka ny voalaza dia voasoratra ao amin'ny Qt izy ka miasa amin'ny Windows sy Linux.
1 Ahoana ny fametrahana diffimg amin'ny Ubuntu 18.04 sy ny derivatives?
2 Ahoana ny fametrahana diffimg amin'ny fonosana deb amin'ny Ubuntu 18.04 sy ny derivatives?
3 Ahoana ny fampiasana diffimg?
Ahoana ny fametrahana diffimg amin'ny Ubuntu 18.04 sy ny derivatives?
Raha te hametraka an'ity fitaovana fanamarinana sary mangatsiaka ity amin'ny rafitrao ianao, tsy maintsy manatanteraka ireto dingana manaraka ireto.
Tsy maintsy manokatra terminal Ctrl + Alt + T izy ireo ary ao no hanoratantsika ity baiko manaraka ity hanampiana trano fitahirizana ao amin'ny rafitray:
Vantany vao vita izany dia hanavao ny lisitry ny tahiry izahay miaraka amin'ity baiko ity:
Ary farany apetrakay amin'ireto baiko manaraka ireto ny fampiharana:
Ahoana ny fametrahana diffimg amin'ny fonosana deb amin'ny Ubuntu 18.04 sy ny derivatives?
Raha tsy te-hanampy tahiry ao amin'ny lisitrao ianao, manana safidy izahay hametraka ity fampiharana ity amin'ny fonosana deba.
Ho an'ity andao ampidino ny fampiharana avy amin'ny ity rohy manaraka ity. Raha vantany vao vita izany dia afaka mametraka ny rindranasa miaraka amin'ny mpitantana fampiharana izay tiantsika isika.
Na koa raha tianao dia azonao apetraka amin'ny terminal miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Ary vonona miaraka amin'izany, hanana ny fametrahana ny fampiharana izahay.
Raha sendra manana olana amin'ny fiankinan-doha isika dia afaka mamaha azy amin'ity baiko ity:
Ahoana ny fampiasana diffimg?
Raha te hampiasa ity rindranasa ity dia tsy maintsy manokatra azy io aloha isika. Ho an'ity dia hitady izany ao amin'ny menio fampiharana izahay hampandeha azy.
Rehefa tafiditra ao anatiny dia tsy mila misafidy ireo sary izay hampitahantsika amin'ny diffimg fotsiny isika.
Ho an'ity andao tsindrio ny kisary fampirimana izay ao amin'ny menio fampiharana ary hisafidianantsika ireo sary hampitahàna, izay ny voalohany dia ny sary tany am-boalohany ary ny faharoa ilay hampiasaina hijerena ireo fahasamihafana.
Vantany vao vita io, arakaraka ny lanjan'ireo sary azo oharina, mety maharitra fotoana fohy vao hiasa ilay rindranasa.
Hisokatra koa ny boaty fifampiresahana izay mamaritra ny haavon'ny fitoviana eo amin'ny sary sy ny isan-jaton'ny fahasamihafana isaky ny piksel, ankoatry ny fampahalalana hafa.
Raha mahafantatra fampiharana hafa mitovy amin'izany ianao, dia aza misalasala mizara izany aminay amin'ny fanehoan-kevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Diffimg: fampiharana fampitahana sary
Chichero dia hoy izy:
Tsy afaka nametraka azy io tamin'ny Ubuntu 18.04 aho. Tsy tokony hiandry ny fivoahan'ny fonosana Bionic ve ianao? Xenial sy Trusty ihany no hitako.
Mamaly an'i Chichero
Dell dia mandefa kahie vaovao miaraka amin'i Ubuntu